မြန်မာနိုင်ငံက သင်ရိုးညွှန်းတန်း ….များမပြင်ကြတော့ဘူးလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြန်မာနိုင်ငံက သင်ရိုးညွှန်းတန်း ….များမပြင်ကြတော့ဘူးလား
မြန်မာနိုင်ငံက သင်ရိုးညွှန်းတန်း ….များမပြင်ကြတော့ဘူးလား
Posted by fatty on Oct 9, 2010 in Creative Writing, Education |4comments
ကျနော်စာသင်ဘူးတယ် ….. သူငယ်တန်းကစပြီး ….. IELTS …GCE ထိ ……။
အဲဒီတော့ …ကလေးတွေရဲ့ course တွေကိုသိနေတယ် …။ အထူးသဖြင့် သူများနိုင်ငံနဲ့ ခြားနားချက်တွေ .. သင်ပုံသင်နည်း teaching method တွေပေါ့။
မတူတာကတော့မပြောပါနဲ့တော့ …. အတော်လေးနောက်ကျနေပြီ ..နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာသင်ခဲ့သူတွေပိုသိမှာပေါ့ ….။
တကယ်တန်းက ကျနော်ဒီအကြောင်းတွေသာရေးနေတာ …ပညာရေးဝန်ကြီးရဲ့အလုပ်ဗျ ..။ ကျနော် ကလေးတွေသနားလို့ပါ …။
မလိုအပ်ဘဲ အလွတ်ကျက်ရ ..ကျူရှင်ယူရ ..နဲ့ စာနဲ့ဘဲအချိန်ကုန်နေကြရတာ … သူတို့ခေတ် အသက်ရှည်ရှည်နေရဘို့တော့လမ်းမမြင်ဘူး ..။
ပထ၀ီလိုမျိုး ..သမိုင်းလိုမျိုး ..သိပ္ပံလိုမျိုး အလွတ်ကျက်ရတာ နဲနဲ တော်သေးတာပေါ့ …။
အင်္ဂလိပ်စာ ဆို ပြဌာန်းထားတာတွေက … သိပ်အကျိုးမရှိလှဘူး …အငယ်တန်းတွေပိုဆိုးသေး ….။
အဲဒါတွေ အလွတ်ကျက်ခိုင်းပြီး .. စာမေးပွဲဖြေခိုင်းနေတာ … ကျနော့အမြင်တော့ ကလေးတွေ ပင်ပန်းသလောက် အကျိုးမဖြစ်တာပါ ..။
အခုအချိန် ကတော့ ဘယ်ထဲ့တွက်နိုင်မှာလဲ …. ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်တော့ အနိုင်ရအမတ်မင်းများ စဉ်းစားကြပါအုံးလို့ …….
၅တန်း ၆တန်း ၇တန်း လောက်မှာ စာအုပ်ထမ်းတဲ့ ဒုက္ခ ကြုံရအုန်းမယ်.. ကလေးတွေ ကျောပိုးအိတ်အကြီးကြီးတွေနဲ့ ကျောင်းသွား ကျောင်းပြန် လုပ်ရသည်။ တနေ့ အတန်းချိန် ၆ချိန် ဆရာမက ၆ယောက် ဖတ်စာအုပ်က ၆အုပ် သင်မဲ့ စာအုပ် ၆ x ၃ သယ်ရသည်။ ဆရာမတွေကလည်း အတန်းငယ်ဆိုရင် နိင်တယ်ဆိုတော့.. အသေမောင်းတာ အတန်းနဲနဲကြီးပြီး ကျောင်းသားတွေ နားထူလာတဲ့ အချိန်မှ ဆရာမတွေလည်း ငြိမ်သွားတယ်။ ၈တန်း ၉တန်း ၁၀တန်းလောက်မှာတော့ ကျောင်းသားတွေ လူလည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းမှာ စာအုပ်တွေ အကုန်ထားခဲ့တော့တာဘဲ.. အိမ်စာတွေ ပါတဲ့ စာအုပ်က လွဲရင် ဖတ်စာအုပ်က အစ ကျောင်းက စားပွဲထဲမှာ ထည့်ခဲ့ကြတယ်။
သူတို့က၀ါသနာမပါဘဲ ၀မ်းရေးအရဆရာဖြစ်လာတော့ ကျောင်းသားနားလည်အောင် ဘယ်လိုသင်မယ်ဆိုတာထက် ဇွတ်ကို အလွတ်ကျက်ခိုင်းတော့တာပါဘဲ၊
ဒါတွေကို ပျောက်အောင် ၀ိုင်းပြင်သင့်ပါတယ်။
ကျနော်ကြားဘူးတာလေးက ဘယ်လိုဆိုတာကို မသင်ယူပါနဲ့တဲ့။
ဟုတ်တယ် အခုခေတ်ကျောင်းတွေက အလွတ်ရဖို့ပဲတာစူနေတာ …. စာမေးပွဲနားနီးပြီဆို (ဆယ်တန်းမပါ) အတန်းတိုင်းလိုလို ဘယ်ဘာသာက ဘာမေးမယ်ဆိုပြီး မေးခွန်းကိုအနီးစပ်ဆုံးချပေး အဲ့ဒါတွေကို အလွတ်ရအောင်ကျက် …… ဖြေ ……. အလွတ်ရပြီးနားမလည်ဘူးဆို ဘာလုပ်မှာလည်း ….. အလွတ်ရတိုင်း ပညာတက်မယ်ဆို သာလိကာတွေ ကြက်တူရွေးတွေလည်း ကျောင်းတက်တော့မှာပေါ့ …. မြန်မာပြည်မှာ ပညာတက်ဦးရေဘယ်လောက်တောင်များတယ်ဆိုပြီးသာပြောနေကြတာ တကယ်နားလည်တဲ့လူကရော ဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာ မတွက်ကြည့်ဖူးဘူးထင်တယ် ….
အနီးစပ်ဆုံးမဟုတ်ဘူး … ကွက်စတိကိုချပေးတာနော် … ကျူရှင်ယူရင်ပေါ့ … အတန်းငယ်လေ စာအုပ်သယ်ရတာများလေ အတန်းကြီးလာလေလေ စာအုပ်မသယ်ရလေလေပဲ … ကလေးလေးတွေရဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ရင် မြေကြီးထဲစိုက်ဝင်တော့မယ့် အတိုင်းပဲ … အများကြီးပဲ … အတန်းကြီးလာတော့ ဆရာမ သိပ်မကြောက်တတ်တော့ စာအုပ်က ရှိသမျှဘာသာ ခုနှစ်ဘာသာ ၊ ရသ ၊ ကာယ တစ်အုပ်တည်း နဲ့ အားလုံးပေါင်းချုပ် . . . ဖတ်စာအုပ်တွေကတော့ ကျောင်းမှာ တစ်စုံထားပစ်ခဲ့လိုက်ရော …